Isibani samakhandlela engilazi enombala
Impahla yomkhiqizo: ingilazi, obukhulu futhi obuqinile.
Umbala womkhiqizo; i-pink, i-amber, vele uhlikihle ngendwangu emanzi ehlanzekile noma engeza inani elincane lomuthi wokuhlanza ukugwema ilanga eliqondile lesikhathi eside.
Ukubekwa komkhiqizo: igumbi lokuphumula, igumbi lokulala, ukutadisha, okubekwe ekhoneni lekhoneni impahla yasekhaya ye-chic, edala umoya wasekhaya wothando.
Idizayini yomkhiqizo: ukubaza kubucayi, isisekelo siwugqinsi futhi sizinzile, futhi uthi lwesibani aluyona nje umhlobiso kuphela kodwa futhi luyindlela yokuphila.
1000ml esobala ingilazi yokugcina ithangi
♦ Izinto zokwakha - Izinto zokwakha ingilazi ezingenamthofu, ezihlanzekile nezisobala, ezinempilo nezinobungani bemvelo, zingonga isikhala esiningi ekhishini lakho nakwikhabethe, ngaleyo ndlela kufinyelelwe enhlanganweni yekhishi elingcono;
♦ Yigcine ihlanzekile futhi ingenamanzi - Idizayini yesembozo sensimbi engagqwali ithuthukisa umphumela wokuvala ukudla kungagcina ukudla kuhlanzekile futhi kungangeni manzi;
♦ Okunhlobonhlobo - Isitsha sokugcina ukudla ekhishini sikulungele ukugcina izithako ezahlukahlukene, kufaka phakathi amaswidi, amantongomane, izinongo, i-oatmeal, okusanhlamvu, amabhisikidi, itiye, ubisi oluyimpuphu, ipasta, ubhontshisi wekhofi, njll.
Occasions Sebenzisa izikhathi - Ingasetshenziswa ezitolo ezilula, amathilomu, emakhishini asekhaya, njll., Isetshenziswa kabanzi;